ခြေလုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲ–ခြေ Fetish အားကစားပြိုင်ပွဲ
ခြေလုပ်ဂိမ်းနှင့်အတူကြွလာအပူဆုံး Fetish အရေးယူ
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာကြောင့်ပြု။ ကျွန်တော်တို့စုဝေးလုံလောက်တဲ့အခြေ fetish ညမ်းကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ဖို့အရာအားလုံးကိုအပေါ်အခြေခံပြီးဒီလိန်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်၊လူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများဒီဆိုဒ်၏အဖန်ဆင်းခဲ့သည် HTML၅ ကိုအသုံးပြု၊သောအရာကိုဆိုလိုကြောင်းသူတို့ကကျွန်တော့်ထက်ပိုပြီးငြိမ်ပုံရိပ်တွေ။ အဲဒီဂိမ်းအလာနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်၊သင်ခံစားနိုင်သည့်အခြေစိတ်ကူးယဉ်အတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ။, ဒါဟာအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားကမ္ဘာပေါ်ကအားအခြေ fetish ဆင့်အခုအချိန်မှာကြောင့်ဂိမ်းအုပ္ဆုိင္ချထွက်ပိုပြီးစီမံကိန်းည့္ဒီဒီလိန်၊ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအချိန်ရှိပါတယ်၊မဟုတ်အခြားမည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များရာပူဇော်သက္ကာကိုထွက်ရှိပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတဲ့နှင့်ကွဲပြား၏ခြေကစားကားဂိမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်။
အပေါင်းတို့နှင့်အခြေဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုလာကြနှင့်အတူအပိုဆောင်းသေားနဲ့စိတ်ကူးယဉ်။ ဒါဟာအလက်ကိုပဲ။ ဒါဟာအရာအားလုံးသင်ချင်ပါတယ်ဆန္ဒရှိမှအခြေကစား။ ကျနော်တို့တောင်မှတွေ့အများကြီးရော်ညမ်းသောအားကစားပြိုင်ပွဲမြင်မှရလာသောအခြေများ၏နာမည်စာလုံးနှင့်နာမည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ထိုနတ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်သူမည်သူမဆိုအခြေ fetish၊ကျွန်ုပ်တို့သည်ရာပူဇော်သက္ကာကိုဖွင့်အပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများအကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းအခမဲ့များအတွက်။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးပူးပေါင်းဖို့၊သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးပေးစေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုငွေနှင့်အမပင်သိရန်လိုအပ်သည်အသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ။, ကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးပြီကျော် ၁၈ အသက်အနှစ်နှင့်အသင်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဘို့အန့်အသတ်ဂိမ်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုမှတ်တံဆိပ်-အသစ်ဆိုက်မှအောက်ပါစာပိုဒ်၏။
အ HTML၅ ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်များမှာမှော်
သင်အွန်လိုင်းကစားသည့်ခြေဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းတည်ဆောက် HTML၅၊အခြေအလုပ္မ်ားဂိမ်းစုဆောင်းသွားရန်သင်အလွန်အံ့သြ။ ဤဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ပူပြင်းသောကြောင့်သူတို့လာအမျိုးမျိုးတို့ကိုအတူသေား၊ကိုယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများ၏ခြေနှင့်အတူဘယ်လိုလဲသူတို့အပျေါမှာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအံ့သြဖွယ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရူပဗေဒအင်ဂျင်အတွက်ဒီဂိမ်းအရေးယူဟန်ဒါလက်တွေ့။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်၊အများဆုံးဂိမ်းကစားနေ POV ရှုထောင့်၊နှင့်အတူနှင့်သင်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်အေပၚကြက်ရရှိသွားတဲ့ jerked ကၡမ်ားခြေထောက်၏ဤအမျိုးသမီးအတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲ။, သင်ရှိသည်နိုင်အရှုပ်သင်ပယ်နှင့်အတူသူတို့ရဲ့အခြေကိုယ့်ကိုယ်အားဖြင့်၊သို့မဟုတ်သင်မင်းသည်သူတို့အတွက်မည်သည့်ရာထူး။ သင်ပည္ဆိုင္ရာအပေါ်သူတို့ရဲ့အခြေအချို့ကိုအတွက်ဂိမ်းများသူတို့ကအမှန်တကယ်လျက်အပည္ဆိုင္ရာပယ်သူတို့ရဲ့ခြေချောင်း။ လည်းရှိပါတယ်သူတွေနဲ့သေားနဲ့ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် fetishes ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိပါတယ်၊အချို့အခြေကြက်နှင့်ဘောလုံးညှဉ်းဂိမ်းများနှင့်ပင်အချို့လိင်ခြေဂိမ္းကစားသည့်အတွက်သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သောသူငယ်ကိုးကွယ်သီးအသီးအခြားရဲ့။ အဲဒီအတွက်လိင်ခြေ fetish အားကစားပြိုင်ပွဲ၊ပင်ပျော်မွေ့မိန်းမကိုယ်နှင့်စအိုခြေ insertions။
ကြောင်း၏ထိပ်တွင်၊အဆိုပါဂိမ်း၏ဒီဆိုဒ်လည်းကြွလာနှင့်အတူအပိုဆောင်းသေားနဲ့လိင်ဆက်ဆံပြုမူ။ ကိုယ့်အခြေသံုးေရအနည္းငွီးပင်များအတွက်အများဆုံးအသန်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဒီဂိမ်းလည်းကြွလာနှင့်အတူကြက်နို့စို့၊လာျတူးနှင့်ပင်အို။
မှတပါးအလာနှင့်အတူမူရင်းစာလုံးနှင့်ငယ်ဘယ်သူသင်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်တိုင်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်လည်းအဆောင်အများကြီးညမ်းဂိမ်း parodiesေခြေ fetish။ ရှိပါတယ်နှစ်ခုအမျိုးအစားသရော်ဂိမ်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။ တဦးကိုလက်ပေါ်မှာအခြေဂိမ်းများနှင့်အတူ။ လျှင်သင်အမြဲလိုခငျြတော့ကြည့်ဖို့အခြေအယွန်းစ်၊ပန္အျ၊Jenifer Laurance သို့မဟုတ်အနီ Johannsson ယခုသင်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်း။ သူတို့ဒီမှာအားလုံးအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်သူတို့အားလုံးဟာသာမန်အဘို့အဆင်သင့်သင်သည်အပည္ဆိုင္ရာအပေါ်သူတို့ရဲ့ခြေချောင်းနှင့်စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း။
ပြီးတော့ကျနော်တို့အပြက်ပေဂိမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးအချို့၏လူကြိုက်အများဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ၊ရုပ်ရှင်တွေ၊ပင်ဂိမ်းနှင့်ကာတွန်း။ အကြားအများဆုံးတန်ဖိုးရော်ဂိမ်းများများဆိုက်သင်တွေ့လိမ့်မည်အကြီးအကျယ် Overwatch လိင်ဂိမ်းအတွက်အရာအားလုံးမိန်းကလေးဇာတ်ကောင်များလုပ်ဆောင်ခြေအကိုင်များအပေါ်သင်တို့၏ကြီးမားသောနံပါတ်များကြက်။ ပြီးတော့ကျနော်တို့အ parodies အမျိုးမျိုးနဲ့ကာတွန်းဇာတ်ကောင်အပါအဝင်၊ဖ်က္ႏိုနှင့်အမှောင်ကနေလုံးဝသူလျှို။
ကျွန်တော်တို့လုပ်စတင်လုပ်ကိုင်သည့်အခြေမအပေါ်အလုပ်အဖွဲ့ဂိမ်းများ၊ကျနော်တို့ပြီးသားသိသာချင်တယ်အသစ်ဂိမ်းများအတွက်စုဆောင်း။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသစ်ဂိမ်းအားလုံးစွာထွင်းထုနှင့်အတူ၊ဂရပ်ဖစ်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းရဲ့အကြောင်းဘာမှမထွက်လာ၌မီးေ။ ဒါပေမယ့်လည်းကြောင့်၊HTML၅ ဂိမ်းများလာနှင့်အတူတိုးပွားလာ-သဟဇာတ။ တကယ်တော့၊ကျနော်တို့သေချာဖန်ဆင်းတော်ကြောင်းရှိသမျှတို့သည်အဂိမ်းများကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအန္းနှင့် iOS ဖုန်းအတွက်၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအလာအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ထားခဲ့ပြီးသူတို့ကြောင့်ဂိမ်းမဝန်သို့မဟုတ်သူတို့ပျက်ကျအတွက်အဆိုးဆုံးအချိန်လေး။
အပေါင်းတို့နှင့်အကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အနိုင်ကစားတိုက်ရိုက်။ သင်မည်မဟုတ်ပင်ကိုဒေါင်းလုဒ်ရန်လိုအပ်သည်တစုံတခုကိုမျှမပြုမီ။ အပေါ်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါဂိမ်းအကြောင်းသင်ကြိုက်ပြီးတော့စတင်ကစားအွန်လိုင်းက၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့ရာက္ဇာကိုသုံး။
အဆင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး Fetish စုဆောင်း?
ကျွန်တော့အထင်အဆင်သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊သင်ရနိုင်ပေါ်မှာငါတို့စာမျက်နှာကိုဖတ်ဒီတင်ပြချက်၊သင်သေချာသင်သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားကြည့်ပါ။ ဒါကသင်ပြုလိုအပ်သမျှကိုကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏:ယ့်ကိရိယာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သင်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးအစုံ! သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ဘာမှမ၊သင်ကမလိုအပ်ပါဘူးမှတ်ပုံတင်ရန်ဆိုက်ပေါ်တွင်နှင့်အဘယ်သူမျှဒေါင်းလုပ်။ ဆိုက်ကိုကျွန်တော်တည်သည်မဟုတ်ပင်သွားဖို့အနှောင်သင်ကြော်ငြာများကိုအတူ။ ကျွန်တော်တို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလုပ်ပါသို့မဟုတ်ကြော်ငြာသောအော်တို-ကစားနေစဉ်သူတို့၏အလယ်၌။, ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်စုံတွဲတစ်တွဲရှိသည်၏အလံကိုကြော်ငြာတွေအချို့တို့ကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ်သင်ထိတွေ့နှင့်အတူအဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များသင်ပြပါလိမ့်မယ်မိမိတို့ခြေအသက်ရှင်ဝက်ဘ်ကမ်။ ဒါကြောင့်၊သင်အတွက်အရာတစ်ခုခုရှိသည်ခြေအရာတစ်ခုခုများအတွက်အခမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ၊ကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးကိုရှိသည်ရန်လိုအပ်အပေါ်အခြေလုပ်။